I-Elitetorrent yehlisa iimfama kwiminyaka eli-13 kamva | Iindaba zeGajethi
Kule minyaka mibini idlulileyo, siye sabona inani elikhulu leendawo ezinemilambo ziqala ukuqengqa iimfama, nangona ngamanye amaxesha ziye zabuya nje emva kwelinye igama. Indawo yokugqibela ye-torrent eye yagqiba kwelokuba ivalwe ligqala lama-Elitetorrents, iwebhusayithi ebesisalathiso kwi-Intanethi ukufumana naluphi na uthotho okanye imovie kuyo yonke iminyaka eli-13 yobomi ebenayo. Esona sizathu siphambili kunye nesibangele ukuba oku kuvalwe ziingxaki zomthetho awayejamelene nazo Ukongeza kokubona ukuba inani elikhulu lababoneleli nge-Intanethi liqale njani ukuvimba ukufikelela kwiwebhu.
Ukuzama ukusebenzisa inani elikhulu labalandeli beqonga, umlawuli wewebhusayithi ubhengeze ukudalwa kwe-eliteros.com, iwebhusayithi apho abathandi beemovie banakho yabelana ngezimvo kunye namava akho ngothotho lweTV kunye neemovie, uguquko olucacileyo aluyi kuba nempumelelo efanayo, nangona ngoku undwendwela i-elitetorrent.net, idomeyini iphinde yahanjiswa kwiphepha elitsha lewebhu.
Kwabaninzi abangazi nto nabangaqhelekanga ukubhenela kolu hlobo lokukhuphela, kungekudala, ukuba belingekaqali, ii-clones ezinje ngamakhowa ziya kuqala ukuvela, zinegama elifanayo ukuzama ukuthatha ithuba lokutsala eli phepha lewebhu ibisoloko inayo, kodwa umxholo ekubonayo mhlawumbi ayisiyiyo eyokwenyani, kodwa iya kugcwele i-malware, ispyware kunye nabanye, ke ndiyacebisa ukuba sebenzisa ezinye iiwebhusayithi ezidumileyo ezikhoyo.
Mhlawumbi ngoku ngoku lixesha elifanelekileyo lokujonga ukubanakho ukuqesha inkonzo yevidiyo yokusasaza. INetflix okwangoku yinkonzo yevidiyo yokusasaza esinika ikhathalogu enkulu, kuba ibikho kwilizwe lethu ixesha elide, nangona sinokukhetha i-HBO okanye iAmazon Prime Video, nangona ikhathalogu yokugqibela inqabile, kodwa yona kunqabile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Elitetorrent yehlisa iimfama kwiminyaka eli-13 kamva